မြန်မာ တို့ အတွက် Guitar ဗဟုသုတ: 106} Synyster Gates
Synyster Gates ရဲ့နာမည်ရင်းက Brian Elwin Haner, Jr.( July 7, 1981)မှာမွေးဖွားသူ ဖြစ်ပါတယ် Avenged Sevenfold တီးဝိုင်းအဖွဲရဲ့ Lead ဂစ်တာကိ်ိုတီးခတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Hollywood မှာရှိတဲ့ Musicians Institute မှာ Guitar
Institute of Technology program များထဲက Jazz နှင့် Classical guitar ကိုသင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကျောင်း
တက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဘဲ The Rev က သူကိုဖုန်း
ဆက်မေးလာပါတယ် သူတို့ အဖွဲ့မှာ Lead ဂစ်တာသမားအဖြစ် ဝင်ရောက်ဂစ်တာတီးပေးဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Haner ဟာ
ကျောင်းတက်ပြီး ဂီတပညာကို ဆက်သင်ရမဲ့အစား
ထိုအဖွဲထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါ တယ်၊ သူဟာ Video ကြည့်ခြင်း စာအုပ်ဖတ်ခြင်းများဖြစ် ဂစ်တာပညာကို ကိုယ်တိုင်လ့လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်၊ သူ့ဖခင်ဖြစ်သူ Brian Haner, Sr ဟာလည်း ဂစ်တာသမားအဖြစ်ကြော်ကြားသူ သချင်းရေးဆရာ ဂစ်တာတီးသမား လူရွှင်တော်
တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Gates ဟာ စပန် ဂျာမန်ကပြား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Gates ဟာ Avenged Sevenfold ကိုသူ၏သူငယ်ချင်းနှင့် အတူ ဝင်ေ၇ာင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊ 1999 မှာသူတို့ရဲ့ ပထမ Album အသံသွင်းယူစဉ်မှာတာ့ သူတို့အသက်ဟာ ၁၈ နှစ်သာရှိပါသေးတယ်၊ Sounding the Seventh Trumpet ဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးချေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Avenged Sevenfold မှာ To End The Rapture ကို version အသစ်ဖြစ်ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်၊ Waking the Fallen, City of Evil, Avenged Sevenfold, Nightmare တို့ဟာ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ Album များဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ "I Won't See You Tonight part 1", "Beast and the Harlot" နှင့် "Sidewinder" ထဲမှာ တော့ Synyster Gates စန္ဒယား တီးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ 2006 Metal Hammer မှာ Total Guitar Magazine "Guitarist of the Year." ရဲ့အကောင်းဆုံး ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်၊ သူစရေးခဲ့တဲ့သချင်းကတော့ So Far Away ဖြစ်ပါတယ်၊ The Rev, ဟာ 2009 December မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်၊ Gates ဟာ 2011, April 20, Revolver Golden God မှာ သူ့မိတ် ဆွေအတီးသမား Zacky Vengeance အတူ ဆုရှိခဲ့ပါတယ်၊ The Rev, ကတီးသွားတဲ့ Pinkly Smooth ဟာ ဟဲဗီး မက်တယ်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတီးပေးထားသော နာမည်ကျော်သချင်းများကတော့ Burn Halo ရဲ့ "Dirty Little Girl" ။ Burn Halo ရဲ့ "Anejo" ။ Brian Haner ရဲ့ "Blow-Up Doll" ။ MGK ရဲ့ "Save Me" နှင့် AxeWound ရဲ့ "Vultures" တို့ဟာသူတို့ဆီမှာအတောင်အောင်မြင်တဲ့သချင်းများဖြစ်ပါတယ်၊ သူအဓိကအသုံး ပြုတဲ့ ဂစ်တာကတော့ Schecter Guitars ဖြစ်ပါတယ် ထို့အတူ ESP guitars ကိုလည်းအသုံးပြုပါသေးတယ်။
Waking The Fallen နှင့် City Of Evil. သချင်းများကို Seymour Duncan SH-8 Invaders နှင့်တီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်၊ သူမသုံးများသောဂစ်တာများထဲမှ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဂစ်တာ သုံးမျိုးကို အောက်မှာ Video များဖြစ်ဖေါ်ပြပေးထားပ်ါတယ်၊
Guitar Strap With Metal Bulle 2011 Revolver Golden Gods
Schecter Guitars: NAMM 2012 Product Showcase
ESP Guitars LTD M-330R, EC-330 & H-330NT - Affordable Metal T
Avenged sevenfold- Nightmare (guitar cover with harmonies)+ tab (ကိုဒီလိုတီးမယ်)
Dirty Little Girl (video)
Dirty Little Girl (guitar cover with harmonies)+ tab (ကိုဒီလိုတီးမယ်)
http://www.rocklistmusic.co.uk/metal.htm Metal Hammer Albums များ